eHimalaya Online || News from nepal » ‘तपाईंले केही गर्न सक्नुहुन्न !’, सानै उमेरमा छोरी न्यासा देवगनको प्रसिद्धिबाट बाबु अजय देवगन किन दुखी छन् ?
२०७९ असार ८ गते बुधबार ०१:५२
अजय देवगन र काजोलकी प्यारी छोरी न्यासा देवगनका तस्बिर भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा प्राय भाइरल हुन्छन्, जसका कारण उनी सधैँ चर्चामा रहन्छिन् । सानै उमेरमा नै न्यासाले आफ्नो स्टाइलिस स्टाइलले सबैको ध्यान खिचेकी छिन् । अहिले यता उनको...
अजय देवगन र काजोलकी प्यारी छोरी न्यासा देवगनका तस्बिर भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा प्राय भाइरल हुन्छन्, जसका कारण उनी सधैँ चर्चामा रहन्छिन् । सानै उमेरमा नै न्यासाले आफ्नो स्टाइलिस स्टाइलले सबैको ध्यान खिचेकी छिन् । अहिले यता उनको फ्यान फलोइङ निकै राम्रो छ, जस पछि आज हामी तपाईहरुलाई उनका बुवा अजय देवगनको भनाई बताउन गइरहेका छौँ । अजय र काजोलकी छोरी न्यासा मात्र १९ वर्षकी छिन् र उनी पनि निकै सुन्दर छिन् ।
उनका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा प्राय चर्चाको विषय बन्छन् । अजय देवगनले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा यसबारे कुरा गरेका थिए । आफ्नी छोरीले छोटो समयमै राम्रो नाम कमाएको बताउनुभयो, त्यसकारण कस्तो लाग्छ ? यो प्रश्नको जवाफ दिँदै अजय भन्छन्, ‘आज सामाजिक सञ्जालको जमाना हो । कुनै पनि कुरा कतै भन्दा छिटो भाइरल हुन्छ।
यससँगै अजय देवगनले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि यसबाट टाढा रहन सल्लाह दिएका छन् । अजयले समय बदलिएपछि केही गर्न नसक्ने बताए । यो सामाजिक सञ्जालको समय हो। यसबाट मुक्तिको विकल्प छैन’।
अजय थप भन्छन्, ‘मेरा बच्चाहरूको लागि यो फरक हुन सक्दैन। यसबाहेक उनले आफ्ना छोराछोरीसँग समय बिताउने गरेको पनि बताए । आफ्ना छोराछोरीमा असल बानीहरू कायम राख्न, उहाँ उनीहरूसँग धेरै कुरा गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई राम्रो बानीहरू विकास गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ।
यति मात्र होइन, अजय देवगनले आफ्ना छोराछोरीलाई सहि र गलतको फरक पनि बुझाउँछन्। यसबारे अजयको भनाइ छ, ‘उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो र नराम्रोको फरक के हो भनेर बुझाइरहन्छन्। उहाँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सधैं एउटा कुरा भन्नुहुन्छ ‘सही काम गर्नुहोस्, सही व्यक्ति बन्नुहोस्’। अरूलाई सम्मान गर्न सिक्नुहोस्।
प्रकाशित मिति २०७९ असार ८ गते बुधबार ०१:५२